COVID-19 ဗိုင်းရဗ်စ် ကူးစက် ခံရသူလဲမရှိ ၊ သေဆုံးသူလည်း မရှိတဲ့ ထူးဆန်းသော အမေရိကန်နိုင်ငံ ရဲ့ နယ်မြေတစ်ခု – Let Pan Daily
COVID-19 ဗိုင်းရဗ်စ် ကူးစက် ခံရသူလဲမရှိ ၊ သေဆုံးသူလည်း မရှိတဲ့ ထူးဆန်းသော အမေရိကန်နိုင်ငံ ရဲ့ နယ်မြေတစ်ခု
Let Pan | May 25, 2020 | World News | No Comments
Central Apia, the capital and only city of Samoa, is the home of the island-country’s commercial businesses and government offices. It is part of the central north coast of Upolu Island.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မှာတော့ မျက်လုံးအားလုံး က နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ တိုးတိုးလာနေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကိန်းဂဏန်းတွေအပေါ်မှာပဲ စုပြုံကျရောက်နေကြတာ ဒီစာကို ရေးနေတဲ့အချိန်အထိ Covid-19 ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ ၁.၆ သန်းကျော်သွားပြီဖြစ်သလို သေဆုံးသူကလည်း 97,426 ကျော် သွားပါပြီ။ ဒီလို ကိန်းဂဏန်းတွေ တရိပ်ရိပ်တက်နေတုန်းမှာပဲ သတိထားချင်စရာ အမေရိကန်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကတော့ဖြင့် ကူးစက်မှုလည်း သုည၊ သေဆုံးမှုလည်း သုညဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒါကတော့ အမေရိကန်ဆမို အာပြည်နယ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူဦးရေ ၅၅၄၆၅ယောက်ရှိတဲ့ ဒီအမေရိကန်ပြည်နယ်ကလေးက ဗိုင်းရပ်စ်ကို ဘယ်လိုအောင်အောင်မြင်မြင် တိုက်ဖျက်နိုင်နေတာပါလဲ။
နယူးယောက်တိုင်းသတင်း မှာတော့ အမေရိကန်ဆမိုအာပြည်နယ်ဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ရောဂါကူးစက် ပျံ့နှံ့လာပြီဆိုတာနဲ့ အချိန်မဖြုန်းဘဲ ချက်ချင်းတုန့်ပြန် ကိုင်တွယ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အာဏာပိုင်တွေက ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ လေယာဉ်အဝင်မှန်သမျှကို ရပ်ဆိုင်းပစ်လိုက်တယ်။ စစ်ဆေးနိုင်စွမ်း ကို မြှင့်တင်တယ်။ မနှစ်က ဝက်သက်ရောဂါဖြစ်တုန်းက ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ ခပ်ခွာခွာနေရေး နည်းဗျူဟာကို ကျင့်သုံးတယ်။ ကျောင်းတွေကို ပိတ်မြဲပိတ် ထားလိုက်ပြီး ဘုရားကျောင်းတွေမှာလည်း လူစုလူဝေးကို ပိတ်ပင်လိုက်တယ်။ ဘားတွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေကို ဆက်ဖွင့်ခွင့်ပြု ထားပေမယ့်လည်း ဧည့်သည်တွေကို အကန့်အသတ် နဲ့သာ လက်ခံခွင့်ပြုတယ်။
အစိုးရရုံးတွေကို ဆက်လက် လည်ပတ်ခိုင်းထားပေမယ့်လည်း တစ်ကြိမ်မှာ ဝန်ထမ်းနည်းနည်းကိုပဲ နေရာထိုင်ခင်းပေးနိုင်အောင် အလုပ်အစီအစဉ်တွေကို ပြောင်းပစ်ရတယ်။ မတ်လမှာကတည်းက အထူးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းထားလိုက်တယ်။ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ကလည်း သမ္မတထရမ့်ဆီ ချက်ချင်းအကူအညီပေးဖို့ စာရေးတောင်းခံတယ်။နောက်ဆုံးတော့ ဒီနယ်မြေလေးဟာ ဖက်ဒရယ် အစိုးရရဲ့ ထောက်ပံ့ငွေ ၃၅သန်း၊ စမ်းသပ်ကိရိယာ ၁၀၀၀နဲ့ ဓာတ်ခွဲစက်လည်း ရလာခဲ့တယ်။
အမေရိကန်ဆမိုအာပြည်နယ် ကလေးဟာ ၁၉၁၈ခုနှစ်က စပိန်တုပ်ကွေးလို ကပ်ရောဂါကိုလည်း ဖြတ်သန်းခဲ့ရ၊ ဇီကာနဲ့ ဝက်သက်လို ကူးစက်ရောဂါတွေ ကိုလည်း ကျော်လွှားခဲ့ရလို့ ကိုရိုနာအကျပ်အတည်းကို ကိုင်တွယ်ရာမှာ အဲဒီအတွေ့အကြုံတွေက အသုံး ဝင်လာခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တစ်ဘဝလုံးစာ စု​ဆောင်ထားတဲ့​ငွေ​ကြေး​တွေ အကုန် ဆေးရုံသို့ လှူတန်းခဲ့တဲ့ အသက် 80 အရွယ် လင်မယား
အရှေ့ အာရှ ပင်လယ်ပြင် တွင် တရုတ် ရေယာဉ်များ ကျုးကျော်လာမှုကို ရင်ဆိုင်ရန် ဂျပန် ကို ကူမည်ဟု အမေရိကန် ကြုံးဝါးလိုက်ပြီ
အိန္ဒိယနိုင်ငံ တပ်မတော် တပ်သားသစ် (၁၀၀၀၀) တိုးမြှင့် ခေါ်ယူရာ ၀င်ရောက်ခွင့် ရရှိရေးတိုးဝှေ့နေရသော လူအုပ်ကြီး
ထိုငျး မှာ ကံကွမ်မာပွောငျးလဲ စဖေို့ အတှကျ လက်ခဏာ လမျးကွောငျးတှေ ကို ပွောငျးလဲပေးနေ…